မြန်မာ့ဆေးဝါးပင်များ (ကစော့ခါး) – Agri Digit News
Posted on Author adminComments Off on မြန်မာ့ဆေးဝါးပင်များ (ကစော့ခါး)
၁။ မျိုးရင်း။ ။ Solanaceae. (ခရမ်းမျိုးရင်း)
၂။ ရုက္ခဗေဒအမည်။ ။ Solanum indicum Linn.
(က) မြန်မာအမည် – ကစော့ခါး
(ခ) အင်္ဂလိပ်အမည် Indian Night- Shade
(ဂ) ကချင်အမည် Haw Hkan Kaju.
အပင်။ ။ နှစ်ကြာခံပင်ငယ် မျိုးဖြစ်၏၊ အမြင့် ၄-၅ ပေခန့်ထိရှိတတ်၏။ ပင်စည်ရိုးတံမာ၍ အမွေးများဖြင့် ဖုံးအုပ်ထား၏။ ချွန်ထက်၍ ပြားသော ဆူးများစွာပါ၏။ ဆူးများသည် စိမ်းဝါရောင် ရှိ၍ သန်မာပြီး အောက်သို့ ကောက်နေ၏။ အကိုင်းအခက်များ၏။
အရွက်။ ။ရွက်လွှဲထွက်သည်၊ အရွက်ပုံသဏ္ဍာန်မှာ ဘဲဥပုံဖြစ်ပြီးဒေါင့် ၇ ဒေါင့်ပါရှိ၏၊ အရွက်မျက်နှာ နှစ်ဘက်လုံးတွင် သေးငယ်သော ဆူးလေးများရှိ၏။ ရွက်ညှာတွင်လည်း ဆူးရှိ၏၊ ရွက်ညှာ ရှည်၏။
အပွင့် ။ ။ ဘေးထွက် ပန်းခိုင်ဖြစ်သည်။ အပွင့်များ သေးငယ်၍ ခရမ်းရောင်ရှိသည်။
အသီး။ ။ လုံးဝိုင်း၏၊ အစေ့များခွံပျော့သီးဖြစ်၍ အခိုင်လိုက်သီး၏၊ မှည့်က လိမ္မော်ရောင်ရှိပြီး အလွန်ခါး၏၊ အချင်း ၁/၄ လက်မခန့်ထိရှိ၏။
၅။ ပေါက်ရောက်သည့်ဒေသ။ ။မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားတွင် ပေါက်ရောက် သည်။
၆။ ပေါက်ရောက်ပုံ။ ။ သဘာဝအလျောက်ပေါက်ရောက်သည်။
၇။ အသုံးပြုသည့်အစိတ်အပိုင်း။ ။ ပဥ္စငါးပါး
၈။ အာနိသင်။ ။ မြန်မာ့ဆေးကျမ်းများအလိုအရ စပ်ရှားရှားရှိ၏။ ခါး၏။ ပူ၏။ လေသလိပ်ကိုကြေစေ၏။ နှုတ်ကိုမြိန်စေ၏။ နှလုံးကိုအားပေး၏။ နူနာ၊ အဖျား၊ ပန်းနား၊ လေနာ၊ ယားနာတို့ကို နိုင်၏။
ပဥ္စငါးပါး (၁) ပဥ္စငါးပါးရည်ကို ညှစ်သောက်ခြင်း၊ ကြိတ်ဖတ်ဖြင့် အုံပေးခြင်းခြင့် မြွေဆိပ် ကင်းဆိပ် ‌ပြေပျောက်စေ၏။
(၂) သွားကိုက်၊ နာကျင်ခြင်း နှင့် သွားပိုးထသောအခါ အမြစ်ကိုသွေး၍ သွား၌ သိပ်ပေးခြင်း၊ အမြစ်မှုန့်ကို မှိုင်းတိုက်၍ အခိုးရှူပေးခြင်းခြင့် သွားနှင့်ပတ်သက်သော ရောဂါများပျောက်၏။
(၃) အမြစ်ကို ဆန်ဆေးရည်နှင့် သွေး၍ သောက်ပါက နှာခေါင်း သွေးလျှံခြင်း ပျောက်၏။
(၄) နား၌ ပိုးကောင်ဝင်လျှင် ကစော့ခါးသီးကို မီးရှို့ပြီး အခိုးခံပါက ပိုးထွက်၏။
(၅) ကစော့ခါးမြစ်ကို အမှုန့်ပြုပြီး ကွမ်းရွက်ပြုတ်ရည်နှင့် သောက်ခြင်းဖြင့် အညှော်ခံငန်းဆေးကြီးအဖြစ် အသုံးပြု ၏။
(၆) ပဥ္စငါးပါး နူပ်နူပ်စဉ်း၍ ရေထက်ဝက်ခမ်းအောင် ကျိုပြီး ပိတ်သန့်သန့်ဖြင့် စစ်၍ အေးလျှင် ပျားရည် တဆယ်သားခန့် ထည့်ပါ၊ လက်ဖက်ရည် ပန်းကန်ဖြင့် ထက်ဝက်ခန့် တနေ့ ၂ ကြိမ်သောက်ပါက မီးယပ်ဖြူ ဆင်းသည့် ရောဂါပျောက်၏။
၁။ မျိုးရင်း။ ။ Liliaceae. (နှင်းပန်းမျိုးရင်း) ၂။ ရုက္ခဗေဒအမည်။ ။ Asparagus officinalis Linn. ၃။ အခေါ်အဝေါ် (က) မြန်မာအမည်။ ။ ကညွတ်။ (ခ) အင်္ဂလိပ်အမည်။ ။ Common Asparagus. (ဂ) မွန်အမည်။ ။ Sani Kamat.